सद्‌गुरु: मनुष्यको रूपमा हामी थुप्रै प्रकारका क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ । तर, हाम्रा क्रियाकलापहरूको प्रकृति जस्तोसुकै भए तापनि, आजको विश्वमा कटिबद्ध व्यवसायीहरूसमेत प्रभावको कुरा गरिरहेका छन्, लाभको होइन । "प्रभाव" को आशय "हामी अरू कसैको जीवनलाई छुन चाहन्छौं" भन्नु हो । व्यवसायीहरूले प्रभावको बारेमा कुरा गरिरहँदा वा तपाईं कसैसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाइरहँदा, वास्तवमा, तपाईं कहीँकतै केही समयको लागि अरूसँगको सीमा वा दायरा भत्काउन चाहिरनु भएको हुन्छ ।
यदि तपाईंले होशपूर्वक आफ्ना सीमाहरू मेटाउनुभयो भने, कुनै कामबाट पाउने अनुभवभन्दा यहाँ यत्तिकै बसेर पाउने अनुभव खर्बौँ गुणा बढी हुन्छ, र त्यो अनुभव अद्‌भुत हुन्छ ।
योगी हुनु भनेको आफ्नो व्यक्तित्व वा छुट्टै अस्तित्व हुनुको सीमारेखालाई मेटाउन तयार रहनु हो । कुनै न कुनै तरिकाले तपाईं बाँकी ब्रह्माण्डबाट आफूलाई अलग्याउने सीमाहरू मेटाउन चाहिरहनु भएको हुन्छ । योग भनेको वैज्ञानिक तरिकाबाट त्यस दिशातर्फ बढ्नु हो । त्यसको लागि तपाईंले कुनै विशाल मात्रामा काम गर्नुपर्दैन; तपाईं कामवासनामा लिप्त हुनुपर्दैन; तपाईं कुनै पनि कुरामा अल्झेर बस्नुपर्दैन । यदि तपाईंले होशपूर्वक आफ्ना सीमाहरू मेटाउनुभयो भने, कुनै कामबाट पाउने अनुभवभन्दा यहाँ यत्तिकै बसेर पाउने अनुभव खर्बौँ गुणा बढी हुन्छ, र त्यो अनुभव अद्‌भुत हुन्छ । आफ्ना सीमाहरूलाई मेटाउनु नै योग हो ।
योगको अर्थ "म अनि बाँकी ब्रह्माण्ड" भन्ने मूर्खतापूर्ण सोचलाई बुझ्नु हो ।
यस धरतीमा मानिसहरूले गरिरहेका सम्पूर्ण वाहियात् कामहरूको मूल कारण ठोस सीमाहरू हुन् । मानिसहरूले आफ्ना सीमाहरूलाई यति ठोस बनाएका छन् कि यदि दुईजना व्यक्तिहरू भेटे भने, जुध्न थालिहाल्छन् । योग भनेको शरीरलाई यताउती बङ्ग्याउने वा बटार्ने अभ्यास होइन; यो मोटोपन घटाउने वा तनावमुक्त गराउने कार्यक्रम समेत होइन । वास्तवमा, योगको अर्थ "म अनि बाँकी ब्रह्माण्ड" भन्ने मूर्खतापूर्ण सोचलाई बुझ्नु हो । जे तपाईंको जीवनको मूल स्रोत हो, उसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको पूर्णतया मूर्खता हो । जब तपाईंलाई यो कुरा ज्ञात हुन्छ, तपाईं योगतर्फ बढिरहनु भएको हुन्छ ।
तपाईंले यो कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । तपाईं चाहे यसलाई प्रभाव भन्नुहोस्, सेवा भन्नुहोस् वा अरू जेसुकै नाम दिनुहोस्, मूलत: जब तपाई म अनि बाँकी संसार भन्नु मूर्खतापूर्ण प्रतिस्पर्धा हो भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ, तपाईं आफ्ना सीमाहरूलाई खुकुलो बनाउन थाल्नुहुन्छ— यही योग हो । यसको अर्थ 'असफल नहुने तरिकाले' त्यसतर्फ बढ्नु भन्ने हो । जब दुई व्यक्तिहरू प्रेममा पर्छन् वा विवाह गर्छन्, उनीहरूलाई आफूहरू योगमा भएको लाग्दछ, आफूहरूले सबै सीमाहरू भत्काएको ठान्छन् । तर, केही समयपछि यो असफल नहुने तरिका होइन रहेछ भन्ने कुरा महसुस हुनेछ ।
यी दुवै चीजहरूलाई आफ्नो अहितमा नभई आफ्नै हितमा राख्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । यदि हाम्रो शरीर र मन नै हामी विरुद्ध गए भने, मनुष्य हुनुको सम्भावना कहिल्यै जान्न सकिँदैन । मानौँ, तपाईंको टाउको दुखेको छ— कुनै ठूलो समस्या होइन, क्यान्सर होइन— एउटा सामान्य टाउको दुखाइले पनि तपाईंको जीवन अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ । वा भनौँ, तपाईंको नाक जतिबेला पनि बन्द भइरहन्छ, कुनै ठूलो समस्या होइन, सामान्य रुघा मात्रै । पहिला त तपाईं भन्नुहोला, "के नै ठूलो कुरा हो र ?" तर, मानिलिनु होस् कि त्यो केही वर्षसम्म रहिरह्यो भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि जीवन्त हुनुको भाव नै रहँदैन । कुनै क्यान्सर वा हृदयघातले नभई सामान्य रुघाले गर्दा नै जीवन्तता समाप्त हुन्छ । यदि तपाईंको शरीर, तपाईंको मन नै तपाईं विरुद्ध काम गर्न थाले भने, तपाईंले मनुष्य हुनु भनेको के हो भन्ने कुराको सम्पूर्ण आयामलाई पूरै गहिराइमा खोज गर्न सक्नुहुन्न ।
मेरा बुबाको पिँढीमा उहाँहरूले दैनिकी लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो । मेरै पिँढीमा पनि धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवनका सबै पक्षहरू समेटेर दैनिकी लेख्ने गर्थे, अनि उनीहरू त्यो कसैलाई देखाउन चाहँदैनथे । यदि केही गरी कसैले शुरुको पाना खोल्यो भनेमात्र पनि उनीहरू निकै दुःखी हुन्थे । "मेरो जानकारीबिना तपाईंले मेरो दैनिकी कसरी खोल्न सक्नुभयो ?"— त्यसो गर्नु अपराध जस्तै हुन्थ्यो ! तर, अहिलेको पिँढीलाई हेर्ने हो भने, उनीहरू आफ्नो जीवनको हरेक पक्षहरू फेसबुकमा राखिरहेका हुन्छन्, अनि यहाँ सम्म कि यदि त्यो कसैले हेरेन भने उनीहरू निकै दुःखी हुन्छन् । जस्तै कि, "म नास्ता गरिरहेको छु,"— फोटो अपलोड ! "म आइसक्रिम चाटिरहेको छु,"— फोटो अपलोड ! अनेक थरीका कुराहरू फेसबुकमा अपलोड गरिएका हुन्छन् ।
योग: अधिक छिटो रूपान्तरण गर्ने उत्प्रेरक
यदि मानिसहरूले सही तरिकाले योग प्रक्रियाहरूको अभ्यास गर्ने हो साथै त्यसमा आफूलाई समर्पित गर्ने हो भने, यसबाट यस्ता कुराहरू सम्भव हुन्छन्, जुन मानिसहरूले कहिल्यै कल्पना समेत गरेका हुँदैनन् ।
तसर्थ, योगको सञ्चार गर्नु (सिकाउनु) भनेको कुनै साधारण काम होइन— यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्य हो । यो कुरा सबैजनाले अहिले नै नबुझ्लान् । तर, यदि हामी सबैले पर्याप्त लगनताले सही काम गऱ्यौँ भने, तपाईंले अबको ५–७ वर्षमा योग विश्वको निम्ति कति जरुरी बन्नेछ भनेर देख्न सक्नुहुनेछ । पाँच वर्षअघिको तुलनामा अहिले नै यसको माग उल्लेखनीय रूपमा बढिसकेको छ । तर, एउटा कुरा के हो भने, कुनै पनि कुराको माग असाध्यै बढी भएको समयमा अचानक अनेक थरीका जाली, भ्रामक, मिलावटी एवं बनावटी कुराहरू देखा पर्न थाल्छन्, किनकि यो एउटा बजार बन्दछ । यदि त्यहाँ गुणस्तरीय चीज नहुने हो भने, मानिसहरूले आफैँ बनाएर अनेक थरीका चीजहरू गर्न थाल्छन् ।
योगको परम्परागत पद्धति अद्वितीय छ । यो जुम्बा वा अरू त्यस्तै कुराहरू जति मनोरञ्जनात्मक नहोला, तर यदि मानिसहरूले सही तरिकाले योग प्रक्रियाहरूको अभ्यास गर्ने हो साथै त्यसमा आफूलाई समर्पित गर्ने हो भने, यसबाट यस्ता कुराहरू सम्भव हुन्छन्, जुन मानिसहरूले कहिल्यै कल्पना समेत गरेका हुँदैनन् । योग एउटा अद्‌भुत पद्धति हो— यसले तपाईंको अस्तित्वको रचना र त्यसको संयोजनलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ । जब मैले बाह्र वर्षको उमेरमा योगको सरल प्रक्रयाहरूको अभ्यास शुरु गरें, यसले शारीरिक रूपमा ममा व्यापक बदलाव ल्यायो । यो कुरा तपाईं कति लगनताले त्यसमा लाग्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
योग कसलाई सिकाउने ? कसरी सिकाउने ?
यदि तपाईं आफूभन्दा पर गएर केही गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, विशेषगरी युवा वर्गहरूका लागि त्यो सम्भवना रहेको छ । तपाईंहरूमध्ये जो त्यस दिशामा जान इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईंहरू आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुहोस् । अनि, त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भनेर हामी हेर्नेछौँ ।
योग विज्ञान सदैव त्यहीँ रहेको हुन्छ, तर यसलाई कसले अघि बढाउँछ अनि कसरी लैजान्छ भन्ने कुराले असाध्यै फरक पार्छ । निर्देशनहरू दिएर योग सिकाउनेबाहेक, योग सञ्चार गर्ने अरू तरिकाहरू पनि छन् । उदाहरणको लागि, यदि तपाईं ईशा योग केन्द्रमा रहेको ध्यानलिङ्ग नजिक जानुभएको छ भने— तपाईंले यस्तो आभास गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ एक योगी बसिरहेका छन्; उनीसँग योगको बारेमा जान्न लायक सबैकुरा छ । उनी बोल्न सक्दैनन्, तर यसको अर्थ उनी कम प्रभावकारी छन् भन्ने होइन ।
म जे–जति गर्न चाहन्छु, त्यसको लागि मसँग सम्पूर्ण ऊर्जा छ । तर, केही अवस्थाहरूमा शरीरको कारणले गर्दा म आफूले सबैथोक गर्न सकिरहेको हुँदिनँ । यदि तपाईं आफूभन्दा पर गएर केही गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, विशेषगरी युवा वर्गहरूका लागि त्यो सम्भवना रहेको छ । तपाईंहरूमध्ये जो त्यस दिशामा जान इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईंहरू आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुहोस् । अनि, त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भनेर हामी हेर्नेछौँ ।